Wasiir Sacad Cali Shire Oo Caddeeyay In Saamigii Somaliland Ku Lahayd Dekedda Berbera Qayb Loo Jaray Itoobiya | Berberatoday.com
Wasiir Sacad Cali Shire Oo Caddeeyay In Saamigii Somaliland Ku Lahayd Dekedda Berbera Qayb Loo Jaray Itoobiya
Hargeysa(Berberatoday.com)-Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa markii u horaysay cadeeyay halka uu ka imanayo saamiga 19% ah ee dekedda Berbera laga siiyay dawladda Itoobiya.
Wasiir Sacad Cali Shire, oo u waramay wargeyska Geeska Afrika, wuxuu sheegay in DP world oo lahayd saami ah 65% laga jaray 14%, halka Somaliland oo lahayd 35% laga jaray 5%, sidaasna Itoobiya lagu siinayo 19%, waxase uu sheegay inaanay Itoobiya weli si rasmi ah qayb uga noqon maalgashiga dekedda Berbera.
Waraysiga oo uu sidoo kale Wasiir Sacad Cali Shire, kaga hadlay natiijadii shirkii dawladda Somaliya ee London lagu qabtay, xidhiidhka beesha caalamka iyo Somaliland, wuxuu u dhacay sidan:
Mudane Wasiir, su’aalo badan baa la iska weydiinayaa, siyaabo kala duwanaana waa looga hadlay Saamiga 19% ee Itoobiya laga siinayo Dekadda Berbera,Wasiirka Ganacsigu si kooban buu uga hadlay, Afhayeenka Madaxtooyaduna wuu ka hadlay. Wasiir markaas sharaxaad naga sii saamigaas Itoobiya la siinayo sida loogu jarayo iyo sababta keentayba?
Shirkadii aynu maalintii dhawayto furnay, ee ka diiwaan gashan Somaliland, waxa wada leh Somaliland iyo DP World, midina 65% oo ah DP world, midina 35% oo ah Somaliland, laakiin waxa la isla qaatay maadaama Itoobiya tahay macmiilka ugu weyn ee isticmaali doona in iyana laga qayb galiyo, dabadeedna marka ay ka soo qayb gasho, markaas ayaa Itoobiya la siinayaa 19%. Waxaana 19% Itoobiya la siinayaa ka kala imanayaan, 14% waxa siinayaa DP Wolrd, 5% waxa siinayaa Somaliland, wali Itoobiya kama qayb aha, waa markay qayb ka noqdaan.
Markaas Somaliland oo lahayd 35% waxa laga jarayaa 5%, DP world oo lahayd 65 iyana waxa laga jarayaa 14%.?
Itoobiya markay soo gasho, waxay kala noqonayaan 51% DP World ah, Somaliland 30% iyo Itoobiya oo yeelan doonta 19%, markaas marka la leeyahay 19% ayaa la siinayaa Itoobiya macnaheedu maaha waa la iska siinayaa ee way maalgashanayaan oo wixii ku soo beegma saamigooda; maalgashiga oo ahaa 442 Milyan dee way gashanayaan oo wax bilaash ah maaha, laakiin wali halkaas lama gaadhin, laakiin imika waa is fahan uun oo waxa la isla gartay in laga qayb galiyo Itoobiya, madaama aynu doonayno inay isticmaalaan.
Shirkii Somaliya loogu qabtay London, qodobadii laga soo saaray waxa ka mid ahaa in Somaliland iyo Somaliya wada hadaladii la siin amba-qaadayo marka Doorasho ka dhacdo Somaliland, bal ka waran haddii ay Doorasho dhici weydo?
Inagu mar kasta diyaar ayeynu u nahay wada hadalka, ama Doorashada ha ka horeeyso ama ha ka dambayso, markay iyagu diyaar yihiin anaguna diyaar ayaanu nahay.
Shirka London ee Somaliya loo qabtay Somaliland ma ku yeelan karaa wax saamayna?
Shirkaasi inaga inamuu khuseeynin, Somaliya ayuu khuseeyey, waxa kaga jiray oo qudha qodobkaas ah inay Somaliland iyo Somaliya wada hadlaan, qodobkaas laftiisuna wuxuu muujinaya arin laba dawladood ka dhexeeya, oo la kala yidhaahdo Somaliland iyo Somaliya, laakiin waxyaabaha kale ee ka soo baxay inaga inama khuseeyaan,
Xidhiidhka Somaliland iyo Beesha Caalamka maxaa iska bedelay?
Wax alaale wax iska bedelay ma jirto, inuu sii wanaagsanado xidhiidhka Beesha Caalamka aynu la leenahay mooye wax iska bedalay oo ka xumaaday ma jiraan.
Xoghayaha Qaramada Midoobay wuxuu sheegay Dimuqraadiyadii Somaliland sii burburayso, wakhti Somaliland lagu dhaliilo dib u dhaca Doorashooyinka, maxaad ka leedahay?
Waxba inagama burburayaan, Dimuqraadiyad inaga burburaysaa ma jirto, Somaliland waa Wadan Dimuqraadiya, Shan Doorasho ayeynu qabanay, shan bilood ka bacdina Doorashadii lixaad baynu qabsanaynaa insha allaah, Axsaab baynu leenahay, Barlamaan baynu leenahay, madaama ay Doorashooyin dib inooga dhaceen maaha macnaheedu Dimuqraadiyad baa inaga burburtay.